Dadka MRB oo tirinaya kaamirada HPC008
Nidaamka Tirinta Dadka
Dadka Tirinaya Kaamirada
Dareenka Tirinta Goobaha
Nidaamka tirinta baabuurta ee MRB AI HPC199
MRB HPC088 Nidaamka Tirinta Rakaabka ee Tooska ah ee baska
Dadka wireless -ka ah ee MRB waxay ka soo horjeedaan HPC005
MRB wifi -ga cag -cagtu HPC015S
Dadka albaabka MRB waxay ka soo horjeedaan HPC001
Nidaamka sumadda qiimaha MRB ESL HL290
Qalabka MLB ESL
"Madaxa" Dadka tirinaya Kamaradda
Borotokool/API ayaa la bixiyay
In ka badan 95% saxnaan
Bareeso oo Ciyaar si aad u rakibto Dadka tirinaya Kamaradda
Dejinta kontoroolka guryaha ee software -ka
Software lacag la'aan ah
Qiimo jaban iyo qiimo wanaagsan Dadka tirinaya Kamaradda
Looga warbixiyay “Black Tech” madaarka caalamiga ah ee Shanghai Pudong.
Dadkan tirinaya kaamirada waa badeecadeena xiddigta. Waxaa lagu rakibay Madaarka Caalamiga ah ee Shanghai Pudong. Waxaa sidoo kale wareystay TV -ga Shanghai waxaana lagu amaanay tiknoolojiyadda madow, halkaan ka daawo muuqaalka warka:
Qaar badan oo naga mid ah Dadka tirinaya kaameradawaa badeecooyin shati leh. Si looga fogaado khiyaanada, ma aanan gelin nuxur aad u badan mareegaha. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalahayaga iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan annaga Dadka tirinaya kaamerada.
HPC008 Dadka tirinaya kaamerada waxay la mid tahay Hikvision Dadka tirinaya kaamerada, laakiin MRB Dadka tirinaya kaamerada wuxuu leeyahay faa'iidooyin ka duwan Hikvision Dadka tirinaya kaamerada. Waxay isticmaashaa nidaamka tirakoobka socodka rakaabka ku saleysan fiidiyaha si loo sameeyo falanqayn tirakoob sax ah oo ku saabsan xogta taraafikada dukaanka, taas oo si sax ah u tirin karta dukaamada. Macluumaadka sida tirada dadka galaya oo ka baxaya albaab kasta iyo jihada socodka dadka ayaa leh astaamaha la qabsiga xooggan, saxnaanta sare iyo kharashyada hawlgalka oo hooseeya. Falanqaynta tirakoobka socodka rakaabka ee xoogga badan iyo shaqada maareynta ayaa siin karta daraasiin warbixinno macaamiisha ah, waxayna ku dhex milmaan nidaamyada softiweerka dhinac saddexaad si ay u siiyaan go'aan-qaatayaasha taageero xog badan oo cilmiyeed. Si ka duwan HikvisionDadka tirinaya kaamerada, MRB Dadka tirinaya kaameradawaxay leedahay afar teknolojiyad udub dhexaad ah, kuwaas oo ah teknolojiyadda dabagalka shayga, teknolojiyadda tixraaca deegaanka, teknolojiyadda ogaanshaha aadanaha, iyo teknolojiyadda samaynta dariiqa. Iyada oo la falanqeynayo xogta socodka rakaabka ee meelaha laga soo galo iyo ka bixitaanka goob kasta, waa qoondayn macquul ah, jadwalka sayniska iyo dammaanadaha badbaadadu waxay bixiyaan saldhig lagu kalsoonaan karo. Saacadaha shaqada ee macquulka ah waxaa loo dejin karaa iyadoo la raacayo taraafikada macmiilka, tirada dadkana waxaa lagu dejin karaa duruufo gaar ah si ay ula kaashadaan isku xirnaanta alaarmiga. MRB Dadka tirinaya kaamerada inta badan waxaa loogu talagalay suuqyada dukaamaysiga iyo tafaariiqda Bixi taageero adeeg falanqayn oo loogu talagalay dukaamada silsiladda, soo jiidashada dadweynaha, hoolalka bandhigga, gaadiidka dadweynaha iyo meelaha dadku ku badan yihiin.
Shaqada HPC008 Dadka tirinaya kaamerada
1. Xogta ay heshay Dadka tirinaya kaamerada waxaa lagu daraa iibinta, ka dibna heerka iibsiga waa la xisaabin karaa.
2. Socodka rakaabka ee labada dhinac ah ayaa si sax ah loo tiriyaa, wadarta socodka rakaabka waa la tiriyaa, halbeegga waa la buuxiyaa oo masaafaduna way ballaaran tahay.
3. Waqtiga-dhabta ah ogow tirada dadka ee dabaqa kasta ee jidka ilaa HPC008 Dadka tirinaya kaamerada.
4. Isbeddelada socodka rakaabka gudaha ee dukaanka iyo socodka rakaabka celcelis ahaan.
5. Celceliska waqtiga joogitaanka ee booqdayaasha.
6. Xogta socodka rakaabka ee ay soo ururisay HPC008 Dadka tirinaya kaamerada si qoto dheer ayaa loo qodi doonaa, ka dibna xogta waa la isku dari doonaa oo la falanqeyn doonaa.
7. Warbixinta xogta socodka rakaabka hodanka ah, noocyo dareen leh oo noocyo kala duwan leh.
8. Kadib rakibida HPC008 Dadka tirinaya kaamerada goob kasta oo ka mid ah dukaanka, waxaad ku xisaabin kartaa cufnaanta socodka rakaabka ee dukaanka, ka falanqayn xogta dhinacyo badan, oo qiimeyn ku sameeya socodka rakaabka.
9. Tiri tirada dadka ku xayiran dhismaha.
10. Software -ka HPC008 Dadka tirinaya kaamerada samayn karaa xakamaynta deggenaanshaha.
Mashruuca Halbeegyada Qalabka Tilmaamayaasha Waxqabadka
Koronto DC12～36V Isbeddellada danab ee 15% ayaa la oggol yahay
Isticmaalka tamarta 3.6W Isticmaalka awoodda celcelis ahaan
Nidaamka Luqadda hawlgalka Shiine/Ingiriis/Isbaanish
Interface hawlgalka Qaabka qaabeynta hawlgalka C/S
Heerka saxnaanta 95%
Interface dibadda RS485 interface Qiimaha baudhka gaarka ah iyo Aqoonsiga, shabakad mashiinno badan ayaa la taageeray
RS232 interface Qiimaha baudhka gaarka ah
RJ45 Qalabaynta qalabka, gudbinta borotokoolka http
Soo saarista fiidiyaha PAL, nidaamka NTSC
Heerkulka hawlgalka -35 ℃ ～70℃ Jawi hawo wanaagsan leh
Heerkulka kaydinta -40 ~ 85 ℃ Jawi hawo wanaagsan leh
Wakhti-la'aan guul-darro ah MTBF In ka badan 5,000 saacadood
Dhererka rakibidda 1.9 ~ 2.2m
0.001 lux (jawi mugdi ah) ~ 100klux (iftiinka qorraxda tooska ah ee dibadda), looma baahna iftiin buuxin ah, heerka saxsanaantu ma saamayn iftiinka deegaanka.
Heerka caabbinta dhulgariirka
La kulmay QC/T 413 heer qaran "Xaaladaha farsamo ee aasaasiga ah ee qalabka korontada baabuurta"
La kulmay EN 62471: 2008 “Badbaadada sawir-noolaha ee nalalka iyo nidaamyada nalalka”
Darajada ilaalinta La kulma IP43 (gabi ahaanba boodh-ka-hortag, soo-galinta ka hortagga biyaha)
Kala -baxa kuleylka Kulaylka qaab dhismeedka dadban
Dhererka muhiimka ah, ayaa lagula talinayaa inuu doorto muraayad weyn
Natiijooyinka baaritaankaan waxay ku saleysan yihiin dadka celcelis ahaan 1.7M
Ogaanshaha baaxadda waxtarka leh 2M
Dadka MRB oo tirinaya kaamirada HPC008 fiidiyaha
Waxaan leenahay noocyo badan Dadka tirinaya kaamerada, 2D, 3D, AI Dadka tirinaya kaamerada, mar walba waxaa jira mid ku habboon, fadlan nala soo xiriir, waxaan ku talin doonaa midka ugu habboon Dadka tirinaya kaamerada adiga 24 saac gudahood.
Su'aalaha la isweydiiyo ee loogu talagalay Dadka tirinaya Kamaradda HPC008
1.Waa maxay farqiga u dhexeeya miiska Infrared People iyo Dadka tirinaya Kamaradda?
Mabda'a farsamo ee miiska dadka infrared waa in la kiciyo dadka ka soo horjeeda si loo tiriyo iyadoo la jarayo fallaaraha infrared -ka. Dadka tirinaya kaameeradu waa miiska dadka oo tiriya dadka iyagoo aruurinaya sawirro isbarbardhig iyo xukun. Asal ahaan, tiknoolijigu wuu ka duwan yahay. Guud ahaan marka la hadlayo, saxnaanta dadka tirinaya kaamirada ayaa ka sareysa tan miiska dadka infrared -ka.
2.Dadkani tirinta kamarada ma taageeraan WiFi?
Shabakadaha fiilada iyo wireless -ka labadaba waa la taageeraa.
3.Warbixinta socodka rakaabka ee dadka tirinaya kaamerada, waxaan rabaa inaan adeegsado softiweerkayga si aan u akhriyo halkii aan ka ahaan lahaa software -kaaga. Maxaan sameeyaa?
Waxaan bixin doonaa borotokool iyo API marka loo eego baahiyahaaga gaarka ah, ka dibna waxaan ka caawin doonaa farsamayaqaannadaada inay si fiican ugu xiraan qalabkayaga nidaamkaaga, si aad u isticmaasho softiweerkaaga si aad u aragto oo u isticmaasho xogta.
4.Waa maxay taageerada iibinta kadib ee kamaraddan tirinta? Intee in le'eg, Warranty? Waa maxay faa'iidooyinka farsamo ee dadkan tirinaya kaamerada?
Waxaan ka shaqaynaynay dadkan tirinaya warshadaha ku dhawaad ​​20 sano. Waxaan had iyo jeer bixin doonaa taageero iibka kadib. Waxaad naga heli kartaa wakhti kasta iyada oo loo marayo mareegaha, emaylka ama siyaabo kale. Dammaanadda, inta badan shirkadaha kale waxay taageeraan oo keliya 1 sano. Waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa alaabtayada. Waxaan bixinaa dammaanad qiyaastii 2-3 sano. Haddii aad sidoo kale tahay wakiilkayaga, waxaan bixinnaa adeegga dammaanadda si aan xad lahayn si aan u taageerno horumarinta iyo dayactirka dhammaan wakiillada ku jira ganacsiga maxalliga ah inta ugu badan.
5.Xagee laga soo saaray kamaraddan miiska dadka? Ku iibin ku Wadankee? Ma jiraan kiisas rakibid caadi ah?
Annagoo ah xirfadle soo -saare ka hortagga dadka, 20 -kii sano ee la soo dhaafay, waxaan alaabteenna ka iibinnay aagag muhiim ah sida tafaariiqda, dalxiiska iyo gaadiidka adduunka oo dhan si ay gacan uga geystaan ​​ururinta xogta iyo falanqaynta. Kiiska ugu caansan ayaa ah in dadkeenna HPC008 ee tirinaya kaamirada uu qaatay gegida diyaaradaha ee Shanghai Pudong si uu si dhammaystiran u xaliyo dhibaatada Bixinta waqti dheer si uu taksi u qaato. Waxaa loogu yeeraa “teknolojiyadda madow” warka Shanghai. Waxaan leenahay hordhac gaar ah fiidiyaha YouTube -ka ee kore.
6. Sidee ku saabsan Dadka miiska qiimo? Sideen ku heli karaa qiime ka fiican?
Marka la barbardhigo badeecadaha isku midka ah ee dalal kale, alaabadayada waxay leeyihiin faa'iidooyinka tikniyoolajiyadda sare, qiimo jaban, rakibaadda fudud iyo adeegga iibinta kaamil ah kadib. Heerarkayaga buuxa ee miisaaniyeyaashu waxay u dhexeeyaan tobanaan doollar illaa boqolaal doollar. Faahfaahinta, fadlan la tasho shaqaalahayaga iibka, kuwaas oo ku siin doona oraah faahfaahsan.
7. Dadkan ma tirinayaan kaamerada si sahlan loo rakibo?
Rakibaadda ayaa aad ugu habboon. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad saldhigga ku hagaajiso boolal, badeecaduna waxay ku dhegi kartaa salka. Fiilada shabakada iyo korontada waa fur iyo ciyaar. Rakibaadda waxaa lagu dhammayn karaa 5 daqiiqo.
8. Waxaan haystaa dhawr iyo toban dukaan oo silsilad ah. Dadkan tirinaya kaamirada ma samayn karaan tirakoob dhexe? Ma samayn karaa falanqayn kooban?
Dabcan, alaabtayada waxaa loogu talagalay dukaamada silsiladda. Software-ku waa mid aad u awood badan wuxuuna leeyahay shaqooyin badan, sida kala qeybinta gobollada, qeybsiga dukaamada, qeexitaanka rukhsadaha, kontoroolka deggenaanshaha, furitaanka iyo xiritaanka xakamaynta, soo-koobidda wadaagga waqtiga, iwm. .
9. Inta lagu jiro xilliga faafa, waddankeennu wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo xakamaynta xaddidaadda socodka. Miyaan u isticmaali karaa dadkaaga tirinta kaamerada maareynta xaddidaadda socodka shaqaalaha?
Bilowgii 2020, waxaan si gaar ah u soo saarnay softiweer hadda xaddidaya xaaladda cudurrada faafa. Dhammaan tirooyinka dadkayagu waxay ogaan karaan shaqaalaha Xakamaynta Goobaha. Softiweerka kantaroolka ee hadda jira ayaa sidoo kale leh shaqooyin sida furitaanka albaabka iyo xakamaynta xiritaanka, qaylo -dhaan iyo wixii la mid ah.
10. Ma jiraan qaabab kale oo dadka tirinaya kamarada gudaha shirkaddaada, sida dadka 3D tirinaya kaamerada?
20 -kii sano ee la soo dhaafay, annaga oo ah bixiye ka -hortagga dadka, waxaan haysannaa taxaneyaal badan, sida miiska dadka infrared, counter 2D dadka, miiska dadka 3D, miiska dadka AI, iyo daraasiin alaab ah oo aad ka dooran karto, qiimo jaban ilaa qaali ah, min fudud ilaa Hi-tech. Mar walba mid baa kuu yaal.
11. Beer baan leeyahay. Waxaan rabaa inaan tiriyo lo'da iyo idaha, ma awoodaa?
Dabcan, dadkeenna AI ee tirinaya kaamirada ayaa si fiican isu baran kara walxo kala duwan, ka dibna si sax ah isu barbar dhiga oo u tiriya walxaha.
12. Markaan arkay inaad haysato qaabab badan oo dadka ka soo horjeeda, waxaan rabaa inaan ku iibiyo badeecadahaaga waddankayga, ma hagaag baa? Waa maxay hanaanku?
Waxaan soo dhoweynaynaa macaamiisha adduunka oo dhan si ay ugala xaajoodaan arrimaha wakaaladda. Aan wada shaqeyno si aan kor ugu qaadno dadka ku xisaabtamaya mustaqbalka aadka u quruxda badan. Fadlan la xiriir shaqaalahayaga iibka si aad ugala tashato habka gaarka ah. Waad ku mahadsan tahay kalsoonidaada!
Hore: MRB madaxa tirinta kamaradda HPC010
3d Kaamerada Tirinta
3d Dadka Ka Soo Horjeeda
3d Nidaamka Tirinta Dadka
MRB madaxa tirinta kamaradda HPC010
MRB AI dadka ka soo horjeeda HPC198
MRB 3D Dadka tirinta nidaamka HPC009
Alaabtayada waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 100 dal iyo gobol gudaha iyo dibaddaba. Taageerada xooggan ee macaamiisheena, MRB waxay samaysay horumar weyn.
Cinwaanka: Qolka 818-820, dhismaha B, St. NOAH, No. 1759, Jinshajiang Road, Putuo District, Shanghai, China.